Amazon Echo Dot ukubuyekeza - Izindaba Rule
Amazon Echo Dot ukubuyekeza
I Echo Dot konke lokho okukhulu mayelana elikhulu Echo isikhulumi wafingqa ibe puck encane kodwa okubiza one-third of intengo.
igajethi Small kuletha isilawuli sezwi cishe kunoma iyiphi idivayisi smart ekhaya, ngenkathi idlala umculo, aphendvule imibuto ngikutshela sezulu
Lesi sihloko osesikhundleni “Amazon Echo Dot ukubuyekeza: kwafana Echo for one-third of intengo” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoMsombuluko ngomhla ka-28 Novemba 2016 07.00 UTC
I-Amazon Echo Dot kusala yonke izingcezu an Amazon Echo ukuthi sisenze sithakazelise, kodwa ngaphandle isikhulumi ngaphansi kwalo - manje kubiza nje ingxenye eyodwa kwezintathu intengo.
I Dot ungomunye imikhiqizo ezintathu Alexa-amandla kusuka Amazon ubeka yenkampani izwi umsizi front and isikhungo. Mabili kuphela, Echo Dot kanye Echo ayatholakala e-UK: owesithathu, the eziphathwayo isikhulumi Bluetooth esibizwa Amazon Tap, itholakala kuphela e-US.
I-microUSB ikhebuli 3.5mm audio ikhebula ipulaki lingena ngemuva. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Dot kuyinto puck encane emnyama noma emhlophe ne ring kwezibani phezulu, izinkinobho ezine futhi eziningi eyisikhombisa microphone - ohlelweni olufanayo elenza Echo isikhulumi kuhle at yokukuzwa kusukela pretty okuningi kuphi.
It uyalalela out for a "wake elithi", ngakho ngokuzenzakalela igama umsizi izwi equkethwe ngaphakathi Dot: "Alexa". Shano izwi wake kanye nomsizi izwi eza ekuphileni ukuphendula imibuzo, thatha imiyalo nokwenza izenzo.
I Dot has a isikhulumi encane esakhelwe ngaphakathi, okuyinto ozilindele zonke izimpendulo izwi Alexa ikhafule, alamu nezinye izaziso, kodwa hhayi yakhelwe ngempela ukudlala umculo, umsindo tinny.
Esikhundleni the emuva Dot has a port audio-out, okuhloswe ngalo ipulaki ku izikhulumi yakho ekhona. Kungenjalo, kungaba Ukubhangqa ukuba isikhulumi wireless nge Bluetooth.
Kusho ukuthini lokhu kubukeke njengothando?
The Dot white usenayo top emnyama, kodwa nje umklamo walo elula aluzifuneli endaweni on a iKhabhinethi embhedeni-side noma isikhulumi. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Dot ngokumangalisayo neqondayo ehlezi usule noma wanamathela emdulini. Alukho uthando khona futhi ligijima ukukhanya sazungeza lo phezulu ukuthi ubonisa uma ngentshiseko ukukulalela futhi bomvu uma wena shaya inkinobho yisimungulu, kagesi ukhupha mics, ukuze wazi uma kuba futhi hhayi ulalele.
I Dot omhlophe a grey top, okusho ukuthi ivelele ezingaphezu kuka tingahle ikwente loku etafuleni emhlophe umbhede-side, ngokwesibonelo. Ungathola jackets elincane base lesikhumba noma indwangu uma plastic shiny akusho ngempela sinqume nge Decor yakho.
Cindezela izinkinobho phezulu ukulawula ivolumu esakhelwe isikhulumi noma okukhipha izikhulumi yakho exhunyiwe. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Echo Dot angenza noma amawebhusayithi bangenza. Isethi up the efanayo njengoba Echo: upulege, ukuvula lokusebenza Alexa on smartphone yakho bese ulandela imiyalelo ixhume inethiwekhi ye-Wi-Fi.
Once up and egijima, Alexa ongenza ezihlukahlukene izici yakho ejwayelekile umsizi. It Uzosetha Isilinganiso, bakutshele isikhathi, isethi alamu, bakutshele lokho usuku lwakho iqaleka injani ukusuka kukhalenda yakho exhunyiwe, ngikuxoxele uhambo lwakho noma sezulu bese uphendula imibuzo ngazo zonke izinhlobo zezinto.
Alexa likwazi ukufinyelela eziningi ulwazi, kodwa ayemane nje ethuswa idatha Google has kutholakale zayo, okusho Alexa uyothwala kanzima ngemibuzo ethile lapho usesho Google may not.
Umehluko omkhulu wukuthi Alexa uphendula ngendlela ngokumangalisayo womuntu, futhi kungaba cishe ngaso sonke isikhathi ukuthi okushilo ngisho uma ukuphendula lombuzo awunakuphendulwa, okusho ukuthi kufanele uthole kangcono ngokuhamba kwesikhathi njengoba idatha okwengeziwe isuswe singene backend intelligence yokufakelwa.
Alexa has okuthiwa amakhono okungatholakala yanezela yathi kuye. Lezi zinto lokusebenza-like ukunikeza ngamakhono ayo amasha. Lots of izinkampani kanye nezinsizakalo babe namakhono. The ikhono Guardian uyofunda izindaba, sematheni noma ukubuyekezwa, ngokwesibonelo. The National Rail ikhono uzokutshela ukuthi rail yakho uhambo lokuya emsebenzini libukeka. I Allrecipies ikhono uzokwazi ukufunda nawe ungomunye 60,000 izindlela ezahlukene.
Kodwa mhlawumbe isethi best of amakhono etholakalayo Echo Dot smart Izilawuli ekhaya. Lapha kulapho kungena khona i-Dot kukhanya: it has anhlobonhlobo support for amadivaysi smart exhunywe, kusukela izikhulumi kanye Izilawuli akude, izibani, imishini ikhofi noma yini ehlobene a Samsung SmartThings hub.
Alexa, vula izibani egumbini lokuphumula
The Red Light on inkinobho abese futhi ukhanyise ring isimungulu show uma Alexa Asikuzwa kusaba ngoba uma ufuna ubumfihlo kancane. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Out of the ibhokisi isebenza ngayo Philips Hue, kuyilapho amakhono akhona for Nest, Hive, Honeywell, Tadó, LightwaveRF futhi LIFX, nge Sonos kulindeleke ngokushesha.
Once exhunyiwe ungakwazi niyale nanoma yini nje. Kufanele sikhumbule igama into ozama umyalo, kodwa ngaphakathi lokusebenza Alexa ungakwazi izinto group ukubabuyisela on and off nomunye umyalo.
Ngokungafani nezinye izinhlelo smart ekhaya, into eyodwa zingafakwa zibe ngamaqoqo amaningi okusho ukukhanya kungangeni ekamelweni kungaba "lokulala" iqembu kanye in the "upstairs" iqembu mhlawumbe "indlu" iqembu, ukuze ungakwazi vula izibani lokulala nje, lonke upstairs noma ukuvala yonke indlu uma uhamba aphume endizeni.
Ungakwazi futhi ukuthi uhlele ukugqama, umbala, scene noma yini enye izibani yakho ukweseka, kodwa ukukhanyisa kumane kuyisiqalo nje. Cishe noma yimuphi smart ekhaya lisebenze zingalawulwa ngephimbo ne uxhumano kwesokudla.
Ungasetha lokushisa nge a Nest, Ukusetha ikhofi uya nge a smartplug, ushintshele-TV noma, setha ishaneli noma ukwenza noma yini pretty okuningi namadivayisi exhunywe kwi isikhungo SmartThings.
The Echo Dot akudingeki ukuba isetshenziswe todvwa noma. Uma uku lalela we Dots ezimbili noma kwenye idivaysi Echo, oseduze kuphela izokuphendula imiyalo yakho. Amazon ngisho uthengisa kwabo amaphakethe: ukuthenga ezinhlanu uthole khulula yesithupha, noma ukuthenga 10 futhi uthole ababili khulula. Ngokusobala-ke ufuna ukubeka kubo bonke phezu kwendlu yakho.
Lapha Ngiye wasebenzisa ukumaska ​​ngaphesheya emuva we Dot kanye fixer okunamathelayo ukukhweza okwesikhashana odongeni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Isebenza ngokumangalisayo kahle uma aboshelwe odongeni, kodwa kufanele donsa off pad zenjoloba noma kukwenze ubakaki siqu
Alexa izikhangiso on TV usethe zibayise
Ngezikhathi ezithile umsakazo liyakunikhulula zibayise
Uma uke ngiyitholile exhunyiwe izikhulumi the Dot Kuphela yomsindo yayo ngokusebenzisa lezo izikhulumi, ngakho badinga ukushiywa sonke isikhathi ukuze ikwazi ukukhuluma nawe ngisho noma ubhekene hhayi ukudlala umculo
IFTTT futhi Logitech Harmony ukwesekwa ziyeza maduze, okuzokwenza ukunweba kakhulu amawebhusayithi smart ekhaya ukweseka
Kufanele sicabange kahle ngokuthi yini nithatha ukubiza ngamunye amadivaysi axhunyiwe ngoba kuzodingeka ubiza amagama abo ukuze Alexa ukuba ocushiwe umuntu ngamunye
I-Amazon Echo Dot kubiza £ 50 e omnyama noma umhlophe. The elikhudlwana Echo kubiza £ 150.
I Echo Dot konke kuhle lokho mayelana elikhulu Echo isikhulumi wafingqa ibe puck encane kodwa okubiza one-third of intengo.
Ukukwazi ukuzwakalisa control izinto ngaphandle kokuba ukuyikhipha ifoni noma ukusunduza inkinobho uphawula isinyathelo okukhulu phambili Inthanethi Things. Kuvuselela, ekushintsheni, sizibulale izinto kwenkampani iphinde idilize up ezishintshayo isimiso sezinto eziwusizo ngephimbo uzizwa yemvelo futhi kwanelise: akukho lutho ngempela like omasha ekamelweni bese uyala izibani ukuze uvule.
Alexa akuyona ngempela enqobayo izwi umsizi athembisa kube nje okwamanje, kodwa Dot uthola umsebenzi ngendlela lutho ngendlela engenakuqhathaniswa.
Buhle: omuhle amalungu afanayo mic kusho kungaba cishe njalo ukuzwa kuwe, encane kodwa elikhulu ngokwanele ukuba bamuzwe kahle., okukhulu ukwesekwa idivayisi, thulisa kucace, uphendulela Hi-Fi yakho endala ibe smart, Isikhulumi izwi-elawulwa, isilawuli sezwi IoT amadivayisi
Bawo: kudingeka ngempela ukuba ixhunywe ku isikhulumi umculo, Ungeke uphendule umbuzo njalo, njalo-ukulalela into endlini yakho, ayisekeli amakhalenda umsebenzisi multiple noma ulwazi lomuntu siqu, kuphela Spotify eyodwa noma Amazon akhawunti umculo kungahlanganiswa nganoma isiphi isikhathi esisodwa
Withings Body Cardio ukubuyekeza: izikali stylish obsessives impilo
Logitech Harmony Elite ukubuyekeza: Kulula ukusebenzisa ezikude owabelwe ekhaya lakho
$1.6Ezinye Brain Simulation Project Iqala e Switzer ...
CRISPR: kuwumqondo omuhle ukuba 'uthuthukise nendlela' DNA yethu?...
Five Mars nokwatholakala ukuthi uguqulwa underst wethu ...
Peter	-nov 30, 2016	Amazon.com, Isigaba, Gadgets, Internet, Inthanethi sezinto, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology, ukuqashelwa Voice
← Yikuphi Laptop Windows Kungenzeka ukushintsha MacBook Pro? OnePlus 3t Buyekeza →